Kuyini lokhu izinga - Camrip Proper, TC, DVDScr, DVDrip? Ngalolo ukubala, kokuthola ifilimu njengoba Camrip Proper?
Long Sezadlula izinsuku lapho, ukuze kudlule i kusihlwa ababukele i-movie, kwadingeka agijime ukuze esitolo vidiyo. Namuhla, kuvidiyo internet othumele kokwanele ukuthi ungalanda kwikhompyutha yakho ngemizuzu embalwa nje.
Kodwa ngaphezu kwakho kusihloko isifinyezo emfushane ifilimu nakanjani ubona Inani lezinhlamvu usithe ezifana - "camrip efanele, ts, dvdscr" nokunye okunjalo. Hlobo luni ikhodi ekubhekaneni? Ngemva kokufunda lesi sihloko, ngeke zijoyine labo ongazuza izifinyezo enjalo likubeka ngokucacile futhi ulwazi oluwusizo.
Asho ukuthini igama eliyisenzo elithi "ukudabuka"
Ukudabuka - ukuguqulwa lesiNgisi elisho, okusho "evulekile." Enkabeni yalo, lesi senzo lisikisela okulotshiweyo noma ukwephula kolwazi nge recoding kwalo okwalandela.
Intuitively, lokhu kungenziwa wacabanga kanje: Ake sithi ungumnikazi Morse code. Behleli egumbini lami, uthola ukukhanya isignali zokuqukethwe okuthile kusuka kwamakhelwane indlu amawindi. Yini ongayenza ngolwazi? Ungarekhoda ipeni on ephepheni ukuze uthumele izwi, ukudweba noma ukuzuza odongeni efanayo -Morse code. Ngakho perekodiruete ulwazi ngesakhiwo elula bona.
Kwenzeka okufanayo nalapho ukudabuka. Futhi yingakho cishe njalo isifinyezo, okuyinto esikubiza ngokuthi incwadi samanje «sidabukile». Lokhu kusho ukuthi ulwazi lidlule ikhodi.
Kungani udinga kabusha encode movie nhlobo? Ezimweni eziningi, lokhu kwenziwa ukuze unciphise usayizi wefayela. Ngenxa kokucindezelwa ingafinyelela ukonga abalulekile inkumbulo computer. Ngaphezu Ukubhala ngekhodi amafayela angavulwa e inani elilinganiselwe kwezinhlelo recode amafomethi etholakalayo emphakathini kusetshenziswa okuzenzakalelayo ukudabuka kwabo.
CAMRip OKUFANELE - ukuthi ikhwalithi?
Track nge isiqu esinjalo zisuswe ngokushesha esuka izihlalo zabo ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Njengoba lesi sithombe bese umsindo ezilotshwe isiqophi isibukeli. CAMRip OKUFANELE wacabangela okungenani eliphezulu ukurekhoda. ngokuvamile komsindo illegible, isithombe ulahlekelwa kakhulu imibala, nokugxambukela angaphandle ngesimo Silhouettes ukuthuthela ehholo amakhanda futhi elungisiwe ohlabayo impumulo yakho endaweni ethile kumugqa olandelayo - akukhona okungavamile ukuba likhithike.
Ubani odinga movie njengoba CAMRip OKUFANELE? abalandeli Ngokuvamile abhalelwa kubekezela abazimisele ukubekezelela lezi kuhlukunyezwa, kodwa ukwazi ukuthi muhle ashisa izikhotha kanye touted kabanzi.
Futhi uma ubheka okushiwo isiqu kubonisa ukuhlola ama-movie elandiwe, kufana uhlobo isixwayiso - "Camrip efanele", okuyinto ikhwalithi bona ungaphenduli. ngokuthi "ekranki" Abantu isixazululo.
Ingabe kukhona ngcono?
Kwi-inthanethi ungathola incazelo yokuthi CAMRip OKUFANELE - akusiwona nje "ekranki". Ngakolunye uhlangothi kuyiqiniso. Isiqalo «efanele» maqondana yikuphi ukukhishwa libonisa ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo kuqhathaniswa ne umthombo.
Kodwa lokhu kusho ukuthini ngendlela ebonakalako? Ukubona ku-intanethi ujenga ithrekhi kuleli ifilimu entsha njengoba CAMRip futhi siqiniseke ukuthi umuntu esingu wakhe ikhamera nobude bengalo, futhi kwadingeka ukuba ngezikhathi ulungise ukugxila, omunye isiqophi pirates besikhathi sethu uyaqhubeka ekuzingeleni.
Uthatha ikhamera elihle, shtativchik amancane uya ebhayisikobho eliseduze. Njengoba zazihleli kamnandi ensconced ngemuva ehholo, lokhu ngokungangabazeki kahle ngokomthetho omele fighters wokubuka mahhala movie sithathwa ukudalwa amathrekhi pirated, okuyinto kuyoba CAMRip izinga OKUFANELE.
Ngibuya nokubeka izithelo zemisebenzi yabo ku-intanethi, lapho kufanele kunezela incazelo lobuchwepheshe ukukhululwa isiqu «efanele». Yilokho CAMRip OKUFANELE empeleni. Kodwa njengoba wazi, khona tripod akuphazamisi iyiphi moviegoers engumakhelwane sneezing noma ihamba latecomers ekuqaleni esimisweni abantu phambi ikhamera.
Kusho ukuthini TS
Kodwa izinga lokusebenzisa isiqu esithi «TS» empeleni kancane ungcono CAMRip, nakuba futhi asuswe screen endaweni yaseshashalazini movie. Okubalulekile wukuthi usebenzise i ukuthi ucwaningo Kwenziwa ekamelweni esingenalutho professional movie ikhamera ukukhwezwa ngqo idokodo lelivakalako.
Umsindo is esikhulu ithrekhi isiqophi ka-microphone hhayi esakhelwe futhi idluliselwe ngesakhiwo digital track yomsindo ukuqopha yasekuqaleni. Nale umsindo orekhodiwe kumakwe njengokwenziwe «TS» engenakuqhathaniswa ungcono CAMRip.
Namuhla, noma iyiphi ibhayisikobho iphumele ngokushesha yeshashalazi, inenguqulo yokukhangisa. La makhophi zenzelwe abantu zisondelene kakhulu emhlabeni umkhakha ifilimu. Ngokwesibonelo, ozithandayo bagxeki movie ngempela eyatholakala.
Ngakho, lezi zinguqulo yokukhangisa ukopishiwe bese ufaka internet ne dvdscr isiqu. Lena ezinhle izinga isiqophi ngomsindo ecacile nesithombe. Kodwa ukuze unqande noma ugweme ukusabalala abamemezeli zabo ukuphakela amarekhodi anjalo imibhalo engezansi amaningi, okuyinto waxwayisa ngokuthi le nguqulo ayenzelwanga nokusabalalisa ukukopisha. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi ukubukela ibhayisikobho ezindaweni eziningi ezingalindelekile weqa umbala. Lokhu kwenziwa ngenhloso ukuvimbela amakhophi okungagunyaziwe ukukhiqizwa kabusha.
izinga Good itholakale esidlangalaleni
Lapho sibhekene isikhathi kwesizini kanye movie lizovela ku ukudayiswa kwi-DVD-ROM, lawa marekhodi ngokushesha ngaphansi ukudabuka. Thatha yokuqala movie disc futhi onomfutho usayizi oyifunayo. Njengoba ngokuvamile okusetshenziselwa ethandwa abezindaba esitsheni kokuba ukunwetshwa «avi». Yilokho DVDrip - avame ezitholakele ku ukukhishwa isifinyezo. Inani sidabukile enjalo imayelana 1.4 gigabytes.
DVDrip izinga njalo okusezingeni eliphezulu. Ububi angabhekwa ngaphandle kokuba kokucindezelwa yesithombe. Ngokuvamile DVDrip yakhiwa 720h40 usayizi uzimele. Kodwa uma ngabe uzobukela ukuqopha usayizi wesibuko kwelinye nantathu odongeni ke umehluko ngeke ukuwuzwa.
Ukuheha ithelevishini digital
Nokho ngokuvamile kungenzeka ngempela ukuhlangabezana HDTVRip isiqu. Kusho ukuthi umsuka ividyo ne-odiyo amathrekhi esivuna izinga okusezingeni TV digital (HD - ncazelo high, i-TV - TV).
Lezi okuqoshiwe etholakala ngokuzikhandla abaphuca ukugeleza kolwazi kudluliselwe isiteshi sethelevishini digital. Sinenkosi ezinhle image ukucaciseleka (uma esephepheni akuyona lwenziwa HDTVRip Uhlaka kokucindezelwa) futhi umsindo kakhulu. I ethile kuphela kungenzeka khona e logo kwesiteshi kulotshwe, umthombo okuvela kulo wathatha.
World Wide Resources Web
Manje zonke izinhlobo ukusakaza izinhlelo nama-movie zenziwa, abasakazi ithelevishini hhayi kuphela, kodwa futhi ngqo kwi-inthanethi. Lezi zinhlelo elotshiwe, kusetshenzwe futhi kwenziwe kutholakale ukulanda isiqu imakwe WEB-DLRip. Lamarekhodi akuzona nje ezimbi. Sinenkosi isithombe sezinga eliphezulu nanganoma kanye nomsindo omkhulu. Ayikho imiphumela emibi ngesimo ilebula alikho.
Kodwa zingeqedwe ekupheleleni. Kungakhathaliseki ukuthi ayehlala ezindlini ezinkulu WEB-DLRip format, kukhona ukukhululwa, elithatha izinga ngisho ephakeme. It - BDRip. Igama layo imele ukurekhoda, eyenziwa nge disc Blu-ray.
Blu-ray ubuchwepheshe okwamanje - eziphambili kakhulu ekusungulweni ukusakaza ividiyo density anda. Kwakona nje ukuthi ejwayelekile Blu-ray-drive has a usayizi 25 gigabytes, liyazikhulumela. Kodwa le filimu ejwayelekile njengoba Blu-ray, ngokuvamile ezazibhalwa ezimbili ungqimba disc sinesikhundla - 50 gigabytes.
Ukudabuka Blu-ray-Disc ikuvumela ukudala ukukhululwa eliphezulu, okuyinto "ukala" izikhathi angaphansi kwamahlanu umthombo. Futhi ngibonga kule BDRip kuholele emncintiswaneni esezingeni wokusabalalisa.
Kuvulwe amacala amabili ezinsukwini ezidlule
Kodwa phakathi kwakho konke lezi scintillating izinga okusezingeni okuqoshiwe ngokuthula kunolunye uhlobo, okuyinto okukhulunywa banephutha qha. It - VHSRip. ngokuvamile Lesi sithombe empunga futhi akuthandeki. It is ngokuvamile obuhambisana nokuthanda umsindo esikrinini akuyona inkinga njalo kuzwakala kukuhle. Nokho, lawa marekhodi kungukuthi kuphela zinyamalale kodwa uqhubeke ukusakaza ku-inthanethi yonkana.
Iyini imfihlo? Sikhuluma amarekhodi, ekuqaleni yayikhona kuphela VHS-amakhasethi futhi ungazange ngaphambilini computer in high. Ngokuvamile, ziqukethe amarekhodi ewuchungechunge yethelevishini, okuyinto senza in the 80s and 90s.
Khona-ke ethatha ISIFISO yayo. Izethameli evumile ngokuthobeka ukubekezelela enyakaza esikrinini ukuze kabusha ukuphila amaqhawe "Santa Barbara," ibhekana nezinkinga kanye nezikhathi ezinzima nezimnandi, imihlangano kanye partings. Lolu chungechunge American wayesengaba uphawu inkathi yangaphambili amazwe eSoviet Union. Futhi uyakwazi zivuse zasebuntwaneni, kanye ubudala, yezinganekwane omnyama nomhlophe ngomfowabo Ivanushka uDade Alyonushka.
Ngenxa yalezi zizathu, ngaphezu konyaka owodwa siyosinda ukurekhoda, ngesizotha imakwe VHSRip izincwadi.
"UPetru FM": nabalingisi, izinhlamvu kanye "ifilimu aphume lutho"
Le filimu "kusulwe": ukubuyekezwa, izincazelo, sakhiwo kanye nokubuyekeza
"Inethiwekhi Usongo": nabalingisi izici movie
Umlingisi Dmitry Gusev: Biography, Filmography, empilweni yakho
Life umugqa: basuke ethi?
Lapho ukuze umfutho womoya. Umlando kwatholakala umfutho womoya
Yokudlela onophawu "Amanzi" e Kazan
Ingqikithi kanye nezinkomba eziyisisekelo amandla ayitholwa
I-Cardiocrinum (iminduze emikhulu) - isitshalo esingavamile engadini yakho
Chocolate lomshado kwalibaleka
Yini ukugqoka nge nebhantshi lesikhumba? Inhlanganisela ukuthi uhlale in fashion!
Itiye Green ngesikhathi sokukhulelwa - ukuphuza noma ukungaphuzi ukuphuza